Mitengo yezvinhu iri kutarisirwa kukwirazve svondo rino mushure mekunge Zimbabwe National Roads Authority kana kuti ZINARA yawedzera mutengo wekudarika pamatoll gates nezvikamu makumi manomwe nematatu kubva muzana kana kuti 73% kutanga mangwana.
Mari iyi inobhadharwa nemadhora emunyika zvichienderana nemutengo unenge uripo paReserve Bank Foreign Currency Auction.
Izvi zviri kuuya panguva iyo mitengo yezvinhu iri kuwedzerwa zvimwe zvinhu zvichishayikwawo muzvitoro.
Mutevedzeri wemutungamiri webato reCCC uye vaimbova gurukota rezvemari VaTendai Biti vaudza Studio 7 kuti nyaya yehurumende yekumbomisa vemabhanga kukweretesa mari yakakanganisa zvinhu uye zvichatora nguva yakareba kuzvigadzirisa.
Asi gavhuna weRBZ Dr John Mangudya vanoti zvainge zvakakosha kumbomisa vemabhanga kukweretesa mari nekuti pane vamwe vange vokanganisa hupfumi nekutora mari kumabhanga vachinotengesa pamusika wemukoto.
Izvi zvatsinhirwa nemutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers Association VaDenford Mutashu vati zvange zvakakodzera kuti hurumende itore matanho kudzivirira vatengi.
Mutungamiri wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions Amai Florence Taruvinga vati vashandi vave kuda kutambiriswa nemari yekuAmerica nekuti havachakwanise kurarama nemari yemunyika yavari kutambiriswa.
Gurukota rinoona nezvevashandi Muzvinafundo Paul Mavima vaudza Studio 7 kuti hurumende yakagadzirira kuita nhaurirano nevashandi nezvemari yemuhoro.
Svondo rapera dhora remunyika rakadonha zvichienzaniswa nedhira rekuAmerica nezvikamu makumi mana nemapfumbamwe kubva muzana kana kuti 49%.